Ungakuqapha Kanjani Ukusebenza Kwakho Kwe-Organic Search (SEO) | Martech Zone
Ngemuva kokusebenzela ukuthuthukisa ukusebenza kwezinto eziphilayo zalo lonke uhlobo lwesayithi - kusuka kumasayithi amakhulu anezigidi zamakhasi, amasayithi e-ecommerce, amabhizinisi amancane nawasendaweni, kunenqubo engiyithathayo engisizayo ukuqapha nokubika ukusebenza kwamakhasimende ami. Phakathi kwamafemu wokumaketha edijithali, angikholwa ukuthi indlela yami yokwenza ihlukile… kepha iphelele kakhulu kunosesho olujwayelekile lwezinto eziphilayo (SEOi-ejensi. Indlela yami ayinzima, kepha isebenzisa amathuluzi amaningi nokuhlaziywa okubhekiswe kuwo wonke amaklayenti.
Amathuluzi we-SEO Wokuqapha Ukusebenza Kokusesha Kwe-Organic
I-Google Search Console - cabanga nge-Google Search Console (eyayaziwa ngaphambilini njengamathuluzi we-webmaster) njengengxenyekazi ye-analytics ukukusiza ukuqapha ukubonakala kwakho kumiphumela yosesho lwe-organic. I-Google Search Console izokhomba izingqinamba ngesayithi lakho futhi ikusize ukuqapha amazinga akho ngezinga elithile. Ngithe “ngezinga elithile” ngoba i-Google ayinikeli ngemininingwane ephelele yabasebenzisi be-Google abangene ngemvume. Futhi, ngithole amaphutha ambalwa wamanga ku-console avele bese enyamalala. Futhi, amanye amaphutha awakuthinti kakhulu ukusebenza kwakho. Izinkinga zeNitpicking Google Search Console zingachitha isikhathi esiningi… ngakho-ke qaphela.
-Google Analytics - Izibalo zizokunikeza imininingwane yangempela yezivakashi futhi ungahlukanisa ngqo izivakashi zakho ngomthombo wokutholwa ukuqapha ithrafikhi yakho ephilayo. Ungaqhubeka nokukuhlukanisa kube izivakashi ezintsha nezibuyayo. Njengakwi-search console, i-analytics ayivezi imininingwane yabasebenzisi abangene ku-Google ngakho-ke uma uhlukanisa imininingwane ngamagama angukhiye, imithombo yokudlulisela, njll. Uthola kuphela i-subset yolwazi oludingayo. Ngabantu abaningi kangaka abangene kuGoogle, lokhu kungakudukisa ngempela.
Ibhizinisi le-Google - Search engine amakhasi amakhasi (I-SERP) zehlukaniswe zaba izindawo ezintathu ezihlukene zamabhizinisi endawo - izikhangiso, iphakethe lemephu, nemiphumela yemvelo. Iphakethe lemephu lilawulwa yi-Google Business futhi lithembele kakhulu kusithunzi sakho (izibuyekezo), ukunemba kwedatha yebhizinisi lakho, nobuningi bokuthunyelwe kwakho nokubuyekezwa kwakho. Ibhizinisi lendawo, noma ngabe isitolo sokuthengisa noma umhlinzeki wesevisi, kumele liphathe iphrofayili yabo ye-Google Business ngempumelelo ukuze lihlale libonakala kakhulu.
Izibalo zesiteshi se-YouTube - I-YouTube iyinjini yokusesha yesibili ngobukhulu futhi asikho isizathu sokuthi ungabi khona lapho. Kukhona ithani le- izinhlobo ezahlukahlukene zamavidiyo ukuthi ibhizinisi lakho kufanele lisebenzele ukuhambisa ithrafikhi ephilayo kumavidiyo kanye nokudluliswa kwetrafikhi kusuka ku-YouTute kusayithi lakho. Ungasho ukuthi amavidiyo azothuthukisa ulwazi lwezivakashi zakho kuwebhusayithi yakho. Sizama ukuba nevidiyo efanelekile kuwo wonke amakhasi esayithi lebhizinisi ukuze sizenzele izivakashi eziyithokozelayo ngokufunda ithani lemininingwane ekhasini noma ku-athikili.
Semrush - Kunezinto ezimbalwa ezinhle kakhulu Amathuluzi we-SEO laphaya ukuze uthole ukusesha okuphilayo. Sekuyiminyaka ngisebenzisa i-Semrush, ngakho-ke angizami ukukunyakazisa phezu komunye wabanye laphaya... ngifuna ukwenza isiqiniseko sokuthi uyaqonda ukuthi kumele ube ukufinyelela kulawa mathuluzi ukuqapha ukusebenza kwakho kosesho lwe-organic. Uma uvula isiphequluli bese uqala ukubuka amakhasi wemiphumela yenjini yokusesha (I-SERP) uthola imiphumela eyenziwe yaba ngeyakho. Noma ungangenanga ngemvume futhi usewindini eliyimfihlo, indawo okuyona ingathinta ngqo imiphumela oyithola kuGoogle. Leli iphutha elejwayelekile engibona amaklayenti elenza lapho ebheka ukusebenza kwawo ... angene ngemvume futhi abe nomlando wosesho ozohlinzeka ngemiphumela eqondene nawe engahluka kakhulu kusihambeli esivamile. Amathuluzi afana nalawa angakusiza futhi ukukhomba amathuba okuhlanganisa amanye ama-mediums afana nalawa ividiyo, noma ukukhula amazwibela acebile ungene kusayithi lakho ukuthuthukisa ukubonakala kwakho.
Ukuhluka Kwangaphandle Okuthinta Ithrafikhi Engokwemvelo
Ukugcina ukubonakala okuphezulu emiphumeleni yosesho kumagama afanele okusesha kubalulekile ekuphumeleleni kokumaketha kwedijithali kwebhizinisi lakho. Kubalulekile ukukhumbula ukuthi i-SEO akuyona into eyake yaba khona Kwenziwe… Akuyona iphrojekthi. Kungani? Ngenxa yokuhluka kwangaphandle okungaphandle kolawulo lwakho:
Kunamasayithi ancintisana nawe ukuze abekwe ezingeni lezindaba, izinkomba, namanye amasayithi wolwazi. Uma bekwazi ukuwina usesho olufanele, lokho kusho ukuthi bangakukhokhisela ukufinyelela kuzithameli zabo - noma ngabe lokho kuyizikhangiso, uxhaso, noma ukubekwa okuvelele. Isibonelo esihle ngamakhasi aphuzi. I-Yellow Pages ifuna ukuwina imiphumela yosesho isayithi lakho elingatholakalela yona ukuze uphoqeleke ukuyikhokha ukuze wandise ukubonakala kwakho.
Kunamabhizinisi ancintisana nebhizinisi lakho. Kungenzeka batshale imali enkulu kokuqukethwe ne-SEO ukuze bazuze ekuseshweni okufanele oncintisana nakho.
Kunokuhlangenwe nakho komsebenzisi, izinguquko ze-algorithmic simo, nokuhlolwa okuqhubekayo okwenzeka ezinjinini zokusesha. I-Google izama njalo ukuthuthukisa ulwazi lwabasebenzisi nokuqinisekisa imiphumela yekhwalithi yokucinga. Lokho kusho ukuthi ungaba nomphumela wosesho ngolunye usuku bese uqala ukulahlekelwa yilona ngokulandelayo.
Kukhona izitayela zokusesha. Inhlanganisela yamagama asemqoka ingakhuphuka futhi yehle ekuthandeni ngokuhamba kwesikhathi futhi amagama angashintsha ngisho ngokuphelele. Uma uyinkampani yokulungisa i-HVAC, ngokwesibonelo, uzophakama ku-AC ezimweni ezishisayo nezesithando somlilo kubanda. Njengomphumela, njengoba uhlaziya ithrafikhi yakho yenyanga-ngaphezulu kwenyanga, inani lezivakashi lingashintsha kakhulu ngokuthambekela.
Umenzeli wakho we-SEO noma umeluleki kufanele abambe le datha futhi ahlaziye ngempela ukuthi uyathuthuka noma cha nalezi zinguquko zangaphandle ezingaphezulu kwengqondo.
Ukuqapha Amagama Angukhiye Anendaba
Wake wakuthola ukuphakama kwe-SEO lapho abantu bethi bazokuthola ekhasini 1? Ugh… susa lezo zinkundla futhi ungaziniki isikhathi sosuku. Noma ngubani angabeka ekhasini 1 igama eliyingqayizivele… kuthatha noma yimuphi umzamo. Okusiza kakhulu amabhizinisi ukushayela imiphumela yemvelo ukusebenzisa imali kuma-non-branded, imigomo efanele eholela ikhasimende elingaba khona kusayithi lakho.
Amagama agqamile - Uma unegama lenkampani elihlukile, igama lomkhiqizo, noma ngisho namagama abasebenzi bakho… maningi amathuba okuthi uzolinganisa lawo magama okusesha kungakhathalekile ukuthi uzikhandla kangakanani kusayithi lakho. Kungcono ngilinganise Martech Zone… Igama elihle eliyingqayizivele lesayithi lami ebelivele likhona isikhathi esingaphezu kweminyaka eyishumi. Njengoba uhlaziya amazinga akho, amagama angukhiye anegama elinamagama angukhiye angenawo uphawu kufanele ahlaziywe ngokwahlukana.
Ukuguqula amagama angukhiye - Akuwona wonke amagama angukhiye angenawo uphawu anendaba, noma. Ngenkathi isiza sakho singahle sibe ngamakhulu wemigomo, uma kungenjalo kuholele kumthamo ofanele ozibandakanya nomkhiqizo wakho, kungani uzihlupha? Sithathe imithwalo yemfanelo ye-SEO kumakhasimende amaningana lapho sinciphise khona kakhulu ithrafikhi yabo ephilayo ngenkathi sandisa ukuguqulwa kwabo ngoba sigxila kwimikhiqizo nezinsizakalo inkampani enganikela ngazo!
Amagama angukhiye afanele - Isu elibalulekile ekwakheni ifayili le- umtapo wokuqukethwe inikeza inani lezivakashi zakho. Yize kungezona zonke izivakashi ezingaphenduka ikhasimende, ukuba yikhasi eliphelele kakhulu futhi eliwusizo esihlokweni kungakha idumela lomkhiqizo wakho nokuqwashisa online.
Sineklayenti elisha ebelitshalile amashumi ezinkulungwane kusayithi nokuqukethwe ngonyaka odlule lapho likleliswa khona ngamakhulu ukusesha amagama, futhi angikaze ngibe nokuguqulwa okuvela kusayithi. Okuqukethwe okuningi bekungaqondiswanga ngisho nasezinsizakalweni zabo ezithile… bakleliswe ngokoqobo ngokwemigomo yezinsizakalo abangazinikanga. Yeka ukuchitha umzamo! Sikususile lokho okuqukethwe ngoba azisizi izethameli abazama ukufinyelela kuzo.
Imiphumela? Amagama angukhiye angaphansi abalwa… ngokuningi ukwandisa kuthrafikhi yokusesha efanelekile:
Imikhuba yokuqapha ibalulekile ekusebenzeni kosesho lwe-Organic
Njengoba isiza sakho sihamba olwandle lwewebhu, kuzoba nokwehla nokwehla njalo ngenyanga eyodwa. Angikaze ngigxile ezilinganisweni ezisheshayo nethrafikhi yamakhasimende ami, ngiwacindezela ukuba abheke idatha ngokuhamba kwesikhathi.
Ukubalwa kwamagama asemqoka ngesikhundla ngokuhamba kwesikhathi - Ukwandisa isikhundla sekhasi kudinga isikhathi nomfutho. Njengoba wenza nokwandisa okuqukethwe kwekhasi lakho, liphakamisa lelo khasi, futhi abantu babelana ngekhasi lakho, isikhundla sakho sizokwenyuka. Ngenkathi izikhundla ezi-3 eziphezulu ekhasini 1 zibalulekile ngempela, lawo makhasi kungenzeka aqale emuva ekhasini le-10. Ngifuna ukuqinisekisa ukuthi wonke amakhasi esayithi ahlelwe kahle futhi izinga lami lilonke liyaqhubeka nokukhula. Lokho kusho ukuthi umsebenzi esiwenzayo namhlanje kungenzeka ungakhokhi nakwezokuhola nasekuguqulweni izinyanga… kepha singabonisa ngokubonakalayo amaklayenti ethu ukuthi siwahambisa ngendlela efanele. Qiniseka ukuthi uhlukanisa le miphumela ibe yimigomo efanelekile enophawu njengoba kuchaziwe ngenhla.
Inani Lenyanga Yezivakashi Eziphilayo Ngenyanga - Uma ucabangela izitayela zonyaka zamagama osesho ahambisana nebhizinisi lakho, ufuna ukubheka inani lezivakashi indawo yakho elizithola ezinjini zokusesha (ezintsha nezibuya). Uma ukuthambekela kosesho kungaguquguquki inyanga nenyanga, uzofuna ukubona ukwanda kwenani lezivakashi. Uma izitayela zosesho zishintshile, uzofuna ukuhlaziya ukuthi uyakhula yini ngaphandle kwamathrendi osesho. Uma inombolo yakho yezivakashi iyisicaba, ngokwesibonelo, kepha izitayela zokusesha ziphansi kwamagama angukhiye afanele… empeleni wenza kangcono!
Inani Lwezivakashi Zanyanga Zokwemvelo Zonyaka Ngonyaka - Uma ucabangela izitayela zonyaka zamagama osesho ahambisana nebhizinisi lakho, uzophinde uthande ukubheka inani lezivakashi indawo yakho elizithola ezinjini zokusesha (ezintsha nezibuya) uma kuqhathaniswa nonyaka owandulele. Isikhathi sonyaka sinomthelela emabhizinisini amaningi, ngakho-ke ukuhlaziya inani lezivakashi zakho inyanga ngayinye uma kuqhathaniswa nesikhathi esedlule kuyindlela enhle yokubona ukuthi uyathuthuka yini noma uma udinga ukumba ukuze ubone ukuthi yiziphi izidingo ezilungiselelwe.
Inani Lokuguqulwa kusuka ku-Organic Traffic - Uma i-ejensi yakho yomxhumanisi ingabophi ithrafikhi namathrendi emiphumeleni yangempela yebhizinisi, bayakuhluleka. Lokho akusho ukuthi kulula ukukwenza… akunjalo. Uhambo lwamakhasimende lwabathengi namabhizinisi aluhlanzekile ukuthengiswa kwemfucuza njengoba singathanda ukucabanga. Uma singakwazi ukubopha inombolo ethile yocingo noma isicelo sewebhu kumthombo wokuhola, sicindezela amaklayenti ethu kanzima ukwakha izinqubo ezijwayelekile zokusebenza ezibhala lowo mthombo. Sinoxhaxha lwamazinyo, isibonelo, olubuza wonke amaklayenti amasha ukuthi azwe kanjani ngawo… iningi manje selithi iGoogle. Yize lokho kungehlukanisi phakathi kwepakethe yemephu noma i-SERP, siyazi ukuthi imizamo esiyisebenzisayo kubo bobabili iyazuzisa.
Ukugxila ekuguqulweni kuyakusiza naku lungiselela ukuguqulwa! Siphusha amaklayenti ethu ngokuya ngokuningi ukuhlanganisa ingxoxo ebukhoma, chofoza-to-call, amafomu alula, nokunikezwa ukusiza ukukhuphula amazinga wokuguqulwa. Yikuphi ukusetshenziswa okukleliswa phezulu nokukhulisa ithrafikhi yakho ephilayo uma kungashayeli imikhondo eminingi nokuguqulwa?!
Futhi uma ungeke ukwazi ukuguqula isivakashi esingokwemvelo sibe yikhasimende manje, lapho-ke kuzodingeka uphinde usebenzise amasu okondla angabasiza ukuthi bahambe uhambo lwamakhasimende ukuze babe munye. Siyazithanda izincwadi zezindaba, imikhankaso ye-drip, futhi sinikela ngokubhalisela ukuheha izivakashi ezintsha ukuthi zibuye.
Imibiko ejwayelekile ye-SEO Ngeke Ixoxe Indaba Yonke
Ngizothembeka ukuthi angisebenzisi noma iyiphi yezingxenyekazi ezingenhla ukukhiqiza noma yimiphi imibiko ejwayelekile. Awekho amabhizinisi amabili afana ncamashi futhi empeleni ngifuna ukunaka kakhulu lapho singasebenzisa khona futhi sihlukanise isu lethu kunokulingisa amasayithi ancintisanayo. Uma uyinkampani ye-hyperlocal, ngokwesibonelo, ukuqapha ukukhula kwakho kwethrafikhi yamazwe omhlaba ngeke kusize ngempela, akunjalo? Uma uyinkampani entsha engenagunya, awukwazi ukuziqhathanisa namasayithi athola imiphumela ephezulu yokusesha. Noma noma ngabe uyibhizinisi elincane elinesabelomali esilinganiselwe, uqhuba umbiko wokuthi inkampani enesabelomali sokumaketha esingamadola ayisigidi ayikholakali.
Idatha yamakhasimende ngayinye idinga ukuhlungwa, ihlukaniswe, futhi igxile ekutheni izithameli zazo kanye namakhasimende abo kubhekiswe kubani ukuze ukwazi ukwengeza indawo yabo ngokuhamba kwesikhathi. Umenzeli wakho noma umxhumanisi kufanele aqonde ibhizinisi lakho, ukuthi uthengisela bani, yini abahlukanisi bakho, bese ukuhumushela lokho kumadeshibhodi namamethrikhi abalulekile!
Ukudalulwa: Ngingumxhumanisi we- Semrush futhi ngisebenzisa isixhumanisi sethu sokuxhumana kulesi sihloko.
Tags: amagama angukhiye abhalwe uphawuamagama aguquliwe aguquliweI-google analyticsgoogle ibhizinisiisikhundla segama elingukhiyeusezingeni elingukhiyeamazinga wegama elingukhiyeAmagama angukhiyeamagama angukhiye angenawo uphawuukuguqulwa kwezinto eziphilayoi-organic trafficokuguquguqukayo kwethrafikhi ephilayoizivakashi eziphilayoamagama angukhiye afaneleukusebenzisa ngokugcwele injiniukusesha amagamasemrushseoukusebenza kwe-seolokho kubikaama-seo amathuluziyoutubeIzibalo zesiteshi se-YouTubeUsesho lwe-YouTube